China Michero michero yekupeta crate Kugadzira uye Fekitori | Lonovae
Lonovae Plastic Turnover Crates akagadzirirwa kureruka, kupeta, kusimba, kugadziriswazve uye kudhura, ichipa mhinduro kwayo yekupakata kuchengetedza, kuchengetedza nekutakura zvakakosha, zvisina kusimba, zvinhu zvisina mvura kana zvigadzirwa (senge zvemagetsi, cosmetic, michero uye chinwiwa. ) kune vanogovanisa, vatengesi uye vashandisi vekupedzisira. Yakareruka kubata, chengetedza nzvimbo.
Chigadzirwa Chigadzirwa Muriwo michero kupeta crate-LN01
Divi 600 * 400 * 180mm
Chigadzirwa Chigadzirwa Muriwo michero kupeta crate-LN02
Divi 600 * 400 * 255mm
Yakakwirira uye yakaderera tembiricha kuramba
100% nyowani nyowani PP zvinhu
Zvishoma nezvishoma kutsiva echinyakare kavha
Kukosha kwemeso uye tsamba yemukati
Kurasira chitsva zvigadzirwa kurongedza kune mizhinji mitsara kushomeka kwemutoro kugadzikana uye kushomeka kwemutoro kudzivirirwa kunotungamira kukuvara kwechigadzirwa. Mune zvimwe zviitiko zvechivanhu zvigadzirwa zvekutakurika zvinogona kutungamira kukuvadzwa kwemitengo yakakwira kunge 4% nepo Lonovae foldable crates inoderedza mwero uyu kusvika panosvika 0.1%. Iko kusimudzira kwakakosha kune chigadzirwa chigadzirwa uye mutengesi purofiti.
Yakakwirira tembiricha kuramba kwe65 ° C, hapana deformation kana kusungunuka.
Nemishonga tembiricha yakaderera -18 ° C, kwete akaremara uye kwete kusimba.
Yakagadziriswazve mufriji yekuchengetera kana inotonhora cheni, haina kukanganisika ku brittleness uye kuchembera. Kana yakasviba, unogona kushandisa pfuti-geza kuti utaridzike. Zvichienzaniswa nemakatoni, iyo-refu-nguva yekushandisa mutengo wakaderera, uye iyo ngura mwero inogona kunyatso kuderedzwa, uye iyo yekushandisa nguva yakareba kupfuura makore matatu kusvika mashanu.
Kupeta mabhokisi ane zvakanakira kureruka uremu, diki tsoka, uye nyore musangano. Iwo ave achishandiswa zvakanyanya munzvimbo yakavharwa-loop yekuparadzira masisitimu senge makuru makuru ezvitoro, zvitoro zviri nyore, nenzvimbo huru dzekuparadzira nzvimbo.
Mushure mekupetwa, vhoriyamu inoderedzwa neinopfuura 75%, uye ine zvakanakira kurema uremu, shoma nzvimbo, uye nyore kusangana. Yakave iri mumaketani makuru Iyo inoshandiswa zvakanyanya mumashure akavharika masope masisitimu senge muzvitoro, zvitoro zviri nyore, nenzvimbo huru dzekuparadzira.
Nyowani Logistics kupaka mhinduro
Isu Lonovae ine kuzvidzora-kusimudzira, kugadzirwa kweforoma uye jekiseni kugadzira kugadzirwa.
Pashure: Disposable Kicheni Kuchenesa Towel
Zvadaro: Folding crate